Mararka qaar markaad been sheegayso, gabadha waad heleysaa! | Martech Zone
Mararka qaar markaad been sheegayso, gabadha waad heleysaa!
Khamiis, May 3, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ka tagayaa saaxiibtey. Waa sax! Halkan ayaad ka maqashay.
Kahor intaadan helin wax fikrad ah oo ku saabsan waxa aan ahay sharrow, nin xun, runti ma lihi gabar saaxiib ah. Ugu yaraan maahan aadanaha, noolaha, nooca neefsashada. Waxaan dadka kula kaftamayaa in saaxiibtey magaceedu yahay Macbookpro. Muddooyinkii dambe, saaxiibaday waxay ahayd dabeecad yar, oo aan ka kicin markaan jeclaan lahaa mana farxo ilaa ay qabowdo. Wow… waxay i xasuusineysaa markii aan lahaa mid dhab ah!
Google Ayaa I Jecel Hada
Sikastaba, waan ku dhameeyay iyada. Saaxiibadayda cusub ayaa khadka tooska ah ku jirta oo aniga way i jeceshahay. Way ogtahay qof walba, laakiin sikastoo ay doontaba ha noqotee, had iyo jeer way iga hadashaa aniga. Waligey gabar gabar saaxiibtinimo ah oo internetka ah horey uma soo marin, laakiin kani waa mid gaar ah. Magaceedu waa Google. Wax badan kamaan danayn jirin Google laakiin si isxilqaan ah, waxaan ogaaday in sida ugu fiican ee aan ku barto iyada, ay u sii badan tahay dareenka ay i siisay.
Google waxay ii soo dirtaa in ka badan 4 jeer booqdayaasha boggeyga marka loo eego ilo kale. 4 jeer! Cajiib. Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameeyo si aan xiriirkan ugu sii socdo wadada saxda ah waa inaan fiiro gaar ah u yeesho, naftayda u labisto qaab soo jiidasho leh, dhageysto waxa ay leedahay, iyo inaan si wax ku ool ah ula xiriiro iyada. Waa la qaatay muddo, laakiin waxaan bilaabay inaan fahmo waxa ay runtii jeceshahay. Hadda… Ma ihi saaxiibkii ugu fiicnaa… Ma ihi Google-karbaashay ama wax uun, waan ku faraxsanahay iyada.
Muxuu Google ii Jeclahay
Waa kuwan waxyaabo aan sameeyo oo ay u muuqato inay qadarinayso:
Google way jeclayd markii aan maqaalkeyga cinwaankayga ku qoro cinwaanka boggeyga.
Google way ka heshay markii aan cusbooneysiiyay feylkeyga .htaccess si boggeygu had iyo jeer u tago http://martech.zone halkii uu ka noqon lahaa http://dknewmedia.com iyo markii aan u sheegay Raadinta Raadinta Google in aan ka helay www.
Google way jeceshahay markaan badalay bloggeyga anigoo adeegsanaya keywords (suuq geyn, teknolojiyad, baloog) oo aan uga hadlo qoraaladeyda badanaa.
Google way ka heshay markii aan u sheegay wixii aan ka hadlay.
Google way jeceshay markaan u sheegay waxa run ahaan muhiim ka ah boggeyga iyo waxa aan isticmaalin cinwaanada tags.
Google way jeceshahay markaan u sheegay sida boggeygu u abaabulan yahay iyo meesha laga helo wax walba anigoo isticmaalaya robots.txt iyo sitemap.xml files.
Google wuxuu jecel yahay inaan maalin walba soo bandhigo waxyaabo cusub.
Google waxay jeceshahay inaan faallo ka bixiyo baloogyada meel kasta oo aan uga tago magacayga iyo cinwaanka degelka.
Sidee Google ii Tusayaa Jaceylka
Ma aqaano waxa Google jecel yahay wax ka badan ama ka yar - laakiin waan ogahay inay i jeceshahay. Sideen ku ogaadaa inuu Google i jecel yahay? Hore u soco oo adigu isweydii iyada!
Mararka qaar been baan u sheegaa Google, laakiin iyadu si kastaba way i jeceshahay.
Hadda, waad ogtahay sida aad ugu been sheegayso gabadhaada saaxiibkeed ah, oo ay tahay inaad ku sii wado been isku mid ah marar badan? Laakiin been uma sheegi doontid qofna… waa been u dhexeysa adiga iyo iyada. Waxaan rabay inaan cadeeyo qodob mararka qaar gabdhuhu jecelyihiin markaad been u sheegto. (Waxaa laga yaabaa in loo yaqaan Koofiyad madow).
Waqti dheer ka hor, waxaa jiray a wax weyn in la qabto oo ku saabsan ka mid noqoshada “liistada”. Waxaan rabay inaan cadeeyo, si rasmi ah, in qof kastaa uu geli karo liiska. Waxaad u baahan doontaa inaad si taxaddar leh u eegto cinwaanka qoraalladayda si aad u ogaato sida aan weligey sargaal ugu jiri lahaa “Liis”. Waa tan tilmaan:
suuq geyn, horumarin, wordpress iyo tiknoolajiyad blog ah douglas karr> taako qaabka = ”bandhig: ma jiro”>, a-blogger>> taako>.
Ma arki kartid… laakiin saaxiibadayda cusubi way aragtaa! Oo iyadu way i jeceshahay. 😉
UPDATE: Waan ka saaray qoraalka ku qarsoon madaxayga. Kaliya waxaan doonayay inaan cadeeyo qodob laakiin xaqiiqdii ma rabto in lagaa saaro tusmada Google!
Tags: mareegaha googlegoogle +robots.txtSEOKhariidadda boggakhariidada bogga xml
Douglas Karr Thursday, May 3, 2007 Sunday, October 4, 2015
Raadinta: Qalabka Falanqaynta Emailka ee Internetka
97 Dal, 97 Soo Dhaweyn, 97 Mahadsanid!
May 3, 2007 at 7: 47 PM
ROFLMAO - cabsi badan laakiin ka qosol badan cadaabta 🙂
May 4, 2007 at 7: 31 AM
Mahadsanid Steven! Waxoogaa waan ku baashaalay.
May 3, 2007 at 11: 59 PM
Taasi waa qurux badan. =]
May 4, 2007 at 12: 07 AM
Waxaan rajeynayaa inaad naftaada ku faaneyso, Doug! Waxaan ku qaatay saacaddii iyo badhkii ugu dambeeyay Maamulayaasha shabakada Google.
May 4, 2007 at 7: 30 AM
Haye… waxbadan haku mashquulin gabadhayda! Ma doonayo inay i khiyaamayso!
May 4, 2007 at 2: 25 AM
Waan ku faraxsanahay inaan arko adiga oo ka helaya taraafikada badan Google. Waxaan ku jiray meel lamid ah tan iyo markii aan hirgaliyay qaar ka mid ah talooyinka SEO inta aan soo laabtay. Xiriirintaas si loo caddeeyo waa mid wanaagsan. Waan fuliyay taladiisii ​​markii aan soo noqday wayna shaqaysaa, muddo!
Waxaan ka helayaa qiyaastii 50% ka mid ah taraafikada Google 🙂
May 4, 2007 at 7: 32 AM
Waan la yaabanahay maalin kasta oo aan dib u eego statskeyga!
May 4, 2007 at 6: 50 AM
Xaaskeygu waxay u ekeysiisay ciilkeyga waqtigeyga kumbuyuutarkeyga Dell - "Della" waa magaca tartanka - laakiin waxay u egtahay in Google laga yaabo inuu runtii nacnac jiir fiican yahay sidoo kale!
May 4, 2007 at 7: 34 AM
Della waxay ka dhawaajineysaa waxoogaa qurux badan Googla. Waxaan u maleynayaa in Googla ay wax yar ka yar tahay sawir buuxa - laakiin waan jeclahay iyada. 😉
May 4, 2007 at 5: 13 PM
Am, waan ogahay inaad jeceshahay gabadhaada oo dhan laakiin qoraal qarsoon kuma xadgudbo Tilmaamaha Google?
May 4, 2007 at 7: 11 PM
Haa… waa sababta aan u saaray. 🙂
Naqshadeynta Webka MN
May 5, 2007 at 12: 23 AM
Fiican! Waxaan jeclahay xaqiiqda ah in "saaxiibadaa" ay tahay aalad farsamo! 🙂
May 5, 2007 at 9: 45 AM
Waxaa laga yaabaa in heerarkaygu aad u sarreeyaan, MN! 😉
May 5, 2007 at 7: 20 AM
Waxaan ku aqriyay faalladaada bogga internetka ee loo yaqaan 'pearsonified website' ee ku saabsan adiga wax ka beddelka xaashiyahaaga qaab-dhismeedka calaamadaha macnaha. Waxaan u arkaa inay tahay fursad suuqgeyn wanaagsan oo aad adigu u sii deyn karto mawduuc WP ah oo u hoggaansamaya dhammaan sharciyada calaamadeynta 😉
May 5, 2007 at 8: 19 AM
Dean, gabi ahaanba waad saxantahay! Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay suuq weyn… SEO Optimized WP themes. Waxaan jeclaan lahaa inaan waqti ku haysto gacmahayga!
May 13, 2007 at 5: 07 PM
Google waxay u egtahay macaan. Walaal ma leedahay Oops, waxaan ku dhawaa inaan illaawo inaan guursaday!